60 Madfac oo lagu weeraray mid kamida saldhigyada AMISOM ee Sh/hoose.
Qaabkee ayay Maxkamada Raddul Madaalim ku soo afjartay muran ka taagnaa boosas ku yaalla degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho [dhageyso]. Madaxweynaha Turkiga oo iskuday dil ka badbaaday Weeraro lagu beegsaday ciidanka DFS oo ka dhacay duleedyada Kismaayo iyo Baydhabo Kenya oo xaqiijisay in saraakil Boolis looga dilay weeraro ka dhacay Mandheera. Maraakiibta Midowga Yurub oo loo kordhiyay boobka ay ku hayaan Kheyraad badda Soomaaliya. Kooxda OLA oo kaabiga ku haysa Addis Ababa iyo Dugsiyada sare ee Itoobiya oo la xiray. Maxkamada Banaadir oo go'aan kasoo saartay Goof ku yaalla degmada Dayniile oo laysku heystay. (DHAGEYSO) Al-Shabaab oo gudaha Kenya ka geystay Weeraro ay gaadiid ku gubeen Askarna ku dileen. Imaaraatka Carabta oo 80 diyaaradood oo nooca dagaalka ah ka iibsanaya Faransiiska. 'Golaha wakiillada 'Somaliland' oo iska fogeeyay in uu qayb ka yihiin eedaha loo haysto Coldoon Saldhigga ciidanka Kenya ee degmada Ceelwaaq oo weerar culus lakulmay iyo warar kale. Mareykanka oo duqeyn Khasaara lagu gaarsiiyay dad shacab ah ka fuliyay dalka Suuriya.
Thursday November 25, 2021 - 12:26:00
Sawir hore Jihaadiyiin ku sugan Soomaaliya
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gobolka Sh/hoose ee dhaca koonfurta Soomaaliya weerar culus ayaa lagu qaaday mid kamida saldhigyada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolkaas.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Afgooye ayaa sheegaya in weerar madaafiic ah shalay gelinkii dambe lagu qaaday saldhigga Laanta Buuro oo ay ku suganyihiin ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Yugaandha.
illaa 60 madfac ayaa la xaqiijiyay in lagu weeraray saldhigga, ilo xog ogolaa ah ayaa sheegay in qaar kamid ah madaafiicda ay gudaha saldhigga ku hoobteen waxaana la arkayay dab ka kacaya qaar kamid ah teendhooyinka ciidanka AMISOM.
Ma ahan markii ugu horraysay oo weerar lagu qaado saldhigyada ciidamada Uganda ee gobolka Sh/hoose, isbuucan gudihiisa dhowr qar ayaa kolonyo katirsan AMISOM lagula beegsaday duleedyada degmooyinka Marka iyo Qoryooleey.
Weeraro lagu beegsaday ciidanka DFS oo ka dhacay duleedyada Kismaayo iyo Baydhabo
Mareykanka oo duqeyn Khasaara lagu gaarsiiyay dad shacab ah ka fuliyay dalka Suuriya.
Copyright © 2021 Somali Memo Media Network All Rights Reserved.